लिंक्डइन सेल्स नेभिगेटर प्रयोग गर्नको लागि विस्तृत गाईड Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 15, 2020 मङ्गलबार, डिसेम्बर 15, 2020 स्टीफन Smulders
लिंक्डइनले एक अर्कासँग व्यवसाय जडान हुने तरीकामा क्रान्तिकारीकरण गरेको छ। यसको बिक्री नेभिगेटर उपकरण प्रयोग गरेर यस प्लेटफर्मको अधिकतम लाभ उठाउनुहोस्।
व्यवसाय आज, चाहे ठूलो होस् वा सानो, लि of्कइनमा भर पर्दछ विश्व भरिका मानिसहरूलाई रोजगारमा लिन। Million२० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूसँग, यो प्लेटफर्म आकार र मूल्यमा प्रत्येक दिन बढ्दैछ। भर्ती बाहेक, लिंक्डइन अब तिनीहरूको डिजिटल मार्केटिंग खेल बढाउन चाहने मार्केटरहरूको लागि शीर्ष प्राथमिकता हो। लिडाहरू उत्पादन गर्न र राम्रो ब्रान्ड मान सिर्जना गर्न जडानहरू सुरू गरेर, बजारहरूले लिked्कइनलाई उनीहरूको समग्रमा अमूल्य थप मान्दछन्। मार्केटिङ रणनीति.
B2B मार्केटिंगको लागि लिंक्डइन
अन्य चीजहरू मध्ये, लिंक्डइनले B2B मार्केटि onमा एकदम प्रभाव पारेको छ। यस प्लेटफर्ममा २००+ देशका करिब 700०० मिलियन व्यवसायको साथ, अब यो B200B व्यवसायहरूको लागि अविश्वसनीय मूल्यवान स्रोत हो। एउटा अध्ययनले देखायो कि B94B बजारका 2% लिked्कइन प्रयोग गर्नुहोस् उनीहरूको सामग्री वितरण गर्नको लागि। B2B कम्पनीका संस्थापकहरू र मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरू बन्न कोशिस गर्दैछन् लिंक्डइन प्रभावकारीहरू कार्बनिक पहुँच बढाउन, ब्रान्ड सचेतना सुधार गर्न, र परिणाम स्वरूप, बिक्रीलाई बढावा दिनको लागि कथन पोष्ट गर्ने तिनीहरूको सेल्फ-ब्रान्ड निर्माण गरेर।
बिक्री प्रतिनिधिहरू पछाडि छैनन्, तिनीहरू लिंक्डइनमा बिक्री फनेलहरू बनाउँदैछन् जुन अन्ततः अधिक बिक्री बजारमा पुग्दछ। बिक्री नेविगेटर, लिंक्डइनद्वारा उपकरण यस प्रक्रियालाई अर्को चरणमा लैजानको लागि डिजाइन गरिएको थियो। लिंक्डइन सेल्स नेभिगेटर अधिक लिंक्डइनको विशेष संस्करणको जस्तै छ। जबकि लिंक्डइन पहिले नै सामाजिक बिक्री को लागी धेरै प्रभावी छ, बिक्री नेविगेटर धेरै अधिक सुविधाहरु प्रदान गर्दछ कि तपाइँ आफ्नो कोठा मा पनि छिटो सम्भावना पाउन को लागी अनुमति दिनेछ।
थप एडो बिना, यो उपकरणसँग सुरू गर्न मद्दत गर्न यहाँ छिटो गाईड छन्।
लिंक्डइन इन नेविगेटर भनेको के हो?
लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर एक सामाजिक बेच्ने उपकरण हो जुन तपाइँलाई तपाइँको व्यवसायको लागि सान्दर्भिक संभावनाहरू पाउनको लागि सजिलो बनाउँदछ। यो गहन फिल्टरि options विकल्प विकल्पको आधारमा प्रयोगकर्ता विवरणको आधारमा गर्दछ जसले तपाईंलाई उन्नत खोजी चालु गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सटीक संभावनाहरू पत्ता लगाउँदै।
बिक्री नेविगेटरको प्रयोग गरेर, बिक्री प्रतिनिधिहरूले कुञ्जी लीडहरू मार्फत खोजी गर्दछन्, उनीहरूको गतिविधिहरूको अनुगमन गर्दछ, र उनीहरूले भेट्न सक्ने समान सम्पर्कहरूको खोजी गर्दछन्। यसले तिनीहरूलाई अझ राम्रो बिक्री उत्पादनको लागि प्रभावकारी पाइपलाइनहरू निर्माण गरेर उनीहरूको खेलमा अगाडि बढ्न सक्षम गर्दछ।
आधुनिक बेच्ने कार्यहरू (र हामी यसलाई मन पराउँदछौं)। बिक्री नेभिगेटर प्रयोगकर्ताहरूले आधुनिक बिक्री गतिविधिहरूबाट विन दरमा 7% को लिफ्टको अनुभव गर्छन्।
साक्षी मेहता, वरिष्ठ उत्पाद विपणन प्रबन्धक, लिंक्डइन
तपाईंले उपयोगमा डुब्नु भन्दा पहिले, हेरौं बिक्री नेभिगेटर वास्तवमै तपाईंको लागि डिजाइन गरिएको छ वा छैन।
तपाइँले लिंक्डइन बिक्री नेभिगेटर को प्रयोग गर्नु पर्छ?
लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर ठीक त्यस्तै हो जुन तपाईं चाहानुहुन्छ यदि तपाईं B2B विक्रेता हुनुहुन्छ।
बिक्री नेभिगेटर लिंक गरिएकोमा सबैका लागि उपलब्ध भुक्तान गरिएको उत्पादन हो। सदस्यता फरक हुन सक्छ। तपाईं एक व्यक्ति, टोली, वा उद्यम सदस्यता मोडेलको लागि तपाईंको आवश्यकताहरू र तपाईंको कम्पनीको आकारको आधारमा अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ।
लिंक्डइन सेल्स नेविगेटरले हामीलाई संगठनमा ती व्यावासायिक मालिकहरू फेला पार्न र उनीहरू समक्ष पुग्न सहयोग पुर्‍याउँछ उनीहरूले उनीहरूको समस्याहरू बिभिन्न रूपमा देखाउनको लागि र अन्तमा उनीहरूले बुझ्दछन् कि वास्तवमै त्यहाँ एक उत्तम समाधान छ।
एड म्याकक्विस्टन, VP ग्लोबल बिक्री, Hyland सफ्टवेयर
जान्नुहोस् कसरी हाईल्याण्ड, अकमै टेक्नोलोजीहरू, र गार्जियनले लिked्कडेन बिक्री नेभिगेटर सामाजिक बिक्रीको लागि प्रयोग गरेको छ।
कसरी लिंक्डइन बिक्री नेविगेटर प्रयोग गर्ने
२०२० मा यस उपकरणको अधिकतम उपयोग गर्नको लागि बिक्री नेविगेटरको आधारभूत कुराहरूबाट शुरू गर्दै, हामी तपाईंलाई सबै पक्षहरूबाट समेट्यौं। यहाँ कसरी तपाइँ स्क्र्याचबाट सुरू गर्नुहुन्छ।
१. तपाईको नि: शुल्क परीक्षण सुरू गर्नुहोस्
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको जानुहोस् बिक्री नेभिगेटर पृष्ठ र क्लिक गर्नुहोस् तपाइँको नि: शुल्क परीक्षण सुरू गर्नुहोस् विकल्प। लिंक्डइनले तपाईंलाई प्रयोग गर्न दिन्छ Nav० दिनको लागि नि: शुल्क बिक्री नेभिगेटर। त्यसोभए, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले त्यसको पहिलो महिनामा पूरा फाइदा लिनुभयो।
यो प्रस्तावको लागि साइन अप गर्न तपाईंले तपाईंको क्रेडिट कार्ड जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ। थप रूपमा, तपाईंलाई परीक्षण अवधि समाप्त हुनुभन्दा अघि तपाईंले सदस्यता रद्द गर्नुभयो भने तपाईंलाई केहि शुल्क लाग्ने छैन।
तपाईंलाई त्यसपछि बिक्री नेभिगेटर वेबसाइटमा निर्देशित गरिनेछ, र यो आफैमा फरक प्लेटफर्म हो। तपाइँ यहाँ जे गर्नुहुन्छ त्यसले तपाइँको सामान्य लिंक्डइन खातालाई असर गर्दैन।
२. तपाईको खाता सेट अप गर्नुहोस्
एक पटक तपाईले खाताको लागि साईन अप गर्नु भएपछि तपाईले आफ्नो प्राथमिकता त्यस अनुरूप सेट गर्नु पर्छ।
तपाईं आफ्नो बिक्री नेविगेटर खाता सेटिंग प्राथमिकताहरू रोजगारको शीर्षक, ठाडो, र क्षेत्रहरू जुन तपाईं लक्षित गर्न चाहानुहुन्छ निजीकृत गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरुमा, बिक्री नेभिगेटरले तपाईंलाई तपाईंको अवस्थित लिंक्डइन कनेक्शन बचत गर्न विकल्प दिनेछ। थप रूपमा, तपाइँ तपाइँको सबै सम्पर्कहरू र खाताहरू आयात गर्न बिक्री नेभिगेटर बिक्री बल वा माइक्रोसफ्ट डायनेमिक्स 365 XNUMX सँग सिnc्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि धेरै विकल्पहरू छन् अन्य अनुप्रयोगहरूको साथ लिंक्डइन एकीकृत गर्नुहोस् यदि तपाईं अन्य सीआरएमहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने।
यस समयमा, तपाईले आफ्नो खाता सेटअपको प्रारम्भिक भागको साथ काम गर्नुभयो। अब तपाईं हेर्न र बचत कम्पनीहरु बिक्री नेभिगेटर सुझाव सक्छ। तपाईंको खातामा कम्पनी बचत गर्दा तपाईंलाई अपडेटहरू अनुसरण गर्न, नयाँ लिड्स ट्र्याक गर्न, र कम्पनी-विशेष समाचारहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ।
यो सम्भावित ग्राहकसँग तपाईंको पहिलो कुराकानी हुनु अघि तपाईंलाई राम्रोसँग जानकारी दिनेछ। जहाँसम्म, कुन कम्पनीहरूले बचत गर्ने भनेर तपाईं अहिले निश्चित हुनुहुन्न, तपाईं यो अंश छोडेर पछि त्यसलाई थप्न सक्नुहुनेछ।
अन्तमा, तपाईले खोजी गर्नु भएको प्रकारको सुत्रबारे जानकारी भर्नु आवश्यक छ। यसका लागि, तपाईं तपाईंको बिक्री क्षेत्र, उद्योग-रूचिहरू, र तपाईंले कार्य गरिरहनु भएको रोजगार कार्यहरूको बारेमा जानकारी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
Lead. सीसा र संभावनाहरू फेला पार्नुहोस्
अर्को कुरा तपाईले आफ्नो खाता प्राथमिकताहरूसँग एकपटक काम गर्नुपर्ला भन्ने कुरा सम्भावितिका लागि खोजी र नेतृत्व सूची बनाउने हो। यसको गर्नका लागि सरल तरिका भनेको लीड बिल्डर प्रयोग गर्नु हो - बिक्री नेभिगेटर भित्रको उपकरण जसले उन्नत खोज फिल्टरहरू प्रस्ताव गर्दछ। बिक्री नेविगेटर प्रयोग गर्ने कसैको लागि, नेतृत्व निर्माणकर्ता कसरी प्रयोग गर्ने जान्नु महत्त्वपूर्ण चरण हो।
तपाइँको खोज मापदण्ड परिष्कृत गर्न, तपाइँ विशिष्ट कार्य शीर्षक वा कम्पनीहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ तपाइँको खोज प्यारामिटरहरू सेट गरी सक्नुहुनेछ, परिणामहरू हेर्न खोजी विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। बिक्री नेभिगेटरले यसको नतिजामा तपाईंलाई अधिक डाटा दिनेछ जुन तपाईं लिंक्डइनको मानक संस्करणमा फेला पार्नुहुनेछ।
प्रत्येक परिणामको छेउमा, तपाईं एक फेला पार्नुहुनेछ नेतृत्वको रूपमा बचत गर्नुहोस् विकल्प। तपाईं यसलाई प्रासंगिक संभावनाहरू बचत गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो संभावनाहरू खोज्नुहोस् बरु ब्याटमा अनियमित व्यक्तिहरूको चयनको सट्टा।
अर्को चरण खातामा नेतृत्व बचत गर्नु हो। यहाँ, खाताहरू पछिल्ला घटनाक्रमहरू जारी राख्नका लागि तपाईले पछ्याउन चाहेको कम्पनीहरूमा हेर्नुहोस्।
पृष्ठको बाँया पट्टि, तपाईं धेरै फिल्टरिंग विकल्प पाउनुहुनेछ, सहित उद्योग, पदनाम, पहिलो र अन्तिम नाम, हुलाक कोड, कम्पनी आकार, वरिष्ठता स्तर, र अनुभव वर्ष।
थप रूपमा, बिक्री नेभिगेटरले टीम लिink्क भन्ने सुविधा पनि प्रदान गर्दछ। तपाईं टीम लिink्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना परिणामहरू फिल्टर गर्नका लागि ब्रिज गरिएको वा टोली जडानहरू हेर्न। यदि टीम लिink्कले तपाइँको सम्भावना र एक टोली सदस्यको बीचमा व्यक्तिगत जडानको सूचना दिन्छ भने, तपाइँ परिचयको लागि तपाइँको आपसी जडानलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा, तपाईंले लिसाको रूपमा संभावनाहरू थप्नु भएपछि, तपाईं तिनीहरूलाई लिड ट्याबमा हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
Fil. बिक्री प्राथमिकता फिल्टर गर्नुहोस्
तपाईंको बिक्री नेभिगेटर प्रोफाइल को सेटिंग्स पृष्ठ मा, तपाईं बीचमा बिक्री प्राथमिकता देख्नुहुनेछ। यहाँबाट, तपाईं उद्योग, भूगोल, प्रकार्य, र कम्पनी आकारको आधारमा तपाईंको आदर्श ग्राहक सूचीलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ।
यी प्राथमिकताहरू देखा पर्नेछ जब तपाईं एक संभावना को प्रोफाइल जाँच गर्नुहुन्छ। र लिंक्डइनले तपाइँले सेट गर्नु भएको प्राथमिकताको आधारमा सिफारिसहरूको नेतृत्व गर्न पनि देखाउँनेछ।
यो व्यावहारिक रूपमा बिक्री नेभिगेटरमा सबै भन्दा प्रभावकारी सम्भावित सुविधा हो। तपाईं या त लिड्स वा खाताहरूमा उन्नत खोजी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ २० भन्दा बढी खोज फिल्टरहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो खोजीमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुञ्जी शब्दहरू, शीर्षक, कम्पनी फिल्डहरू र बढि धेरै समावेश छन्।
Your. तपाईका बचत गरिएको सुराकीलाई हेर्नुहोस्
बिक्री नेभिगेटरको होमपेजमा, तपाइँले सबै हालसालका अपडेटहरू र समाचारहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको बचत गरिएको लीडहरूसँग सम्बन्धित छ। बिक्री नेविगेटरको बारेमा राम्रो कुरा भनेको यो हो कि तपाईले अपडेटहरू देख्न सक्नुहुनेछ जो तपाईंको जडानहरू छैनन्। तपाईंको सम्भावनाहरूमा यी सबै अन्तर्दृष्टिहरूको साथ, तपाईं तिनीहरूलाई संलग्न गराउन अझ राम्रो इनमेल सन्देशहरू (प्रत्यक्ष सन्देशहरू) लेख्न सक्नुहुनेछ।
साथै, यदि तपाइँ तपाइँको अद्यावधिकको क्षेत्र संकीर्ण गर्न चाहनुहुन्छ भने, ती फिल्टरहरू पृष्ठको दायाँ तिर प्रयोग गर्नुहोस्। खाता ट्याबमा, तपाईले बचत गर्नुभएको कम्पनीहरूको सूची हेर्न सक्नुहुनेछ। कम्पनीको बारेमा अधिक जान्नको लागि दृश्य खाता विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ, तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्छ र बढि व्यक्ति थप गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूको कम्पनीहरूको बारेमा नयाँ जानकारी फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यसका अतिरिक्त, तपाईले 'सबै कर्मचारीहरू' विकल्पमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ जसले त्यस कम्पनीका लागि काम गर्ने सबैलाई हेर्न। यो एक धेरै सहज सुविधा हो किनकि यसले तपाईंलाई कुनै पनि समय कम्पनीमा कसैसँग जडान गर्न सक्षम गर्दछ।
Build. सम्पर्क निर्माण गर्नुहोस्
यस बिन्दुमा, तपाईंले आफ्नो सम्भावनाहरू पहिचान गर्नुभयो र उनीहरूको विकासको सक्रियताका साथ अनुसरण गर्नुभयो। अब, तपाईं कसरी उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ?
तपाईको कुञ्जी खाताहरूसँग सम्पर्कमा रहनको लागि जुन उत्तम रणनीति अपनाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई प्रासंगिक र समयमै सन्देशहरू पठाउनु हो। बिक्री नेभिगेटरको सहयोगमा, तपाईं आफ्नो खरीददारको लिंक्डइन गतिविधिहरूको साथ अप-टु-डेट हुन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ कहिले थाहा पाउँन सक्नुहुनेछ र कहिले InMail पठाउनुहोस्। सन्देश क्राफ्ट गर्नुहोस् र टेम्प्लेट बनाउनुहोस् जुन रचनात्मक छलफललाई आमन्त्रित गर्दछ। र त्यो वास्तविक प्रकारको सम्बन्ध निर्माण रणनीति हो जसले तपाईंको सामाजिक बिक्री सफलताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ।
जे होस्, लिंक्डइन सेल्स नेभिगेटरको एक सानो फाइदा छ। तपाईं म्यानुअल रूपमा तपाईंको नेतृत्वको प्रत्येक एकमा पुग्नु पर्छ। यो अत्यधिक समय खपत हुने हुन सक्छ।
यस ट्याक्सिंग कार्यलाई वेवास्ता गर्ने एक तरिका तपाईंको मेसेजिंग प्रक्रिया स्वचालित रूपमा हो। तपाईं केवल एक LinkedIn स्वचालन उपकरण को मद्दत संग गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट गर्नुहोस् कि सबै स्वचालन उपकरणहरू सुरक्षित छैनन्। यदि तपाईं सुरक्षा र दक्षता ग्यारेन्टी चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईं छनौट उत्तम हो विस्तार तपाइँको सामाजिक बेच्ने स्वचालन प्रक्रिया को लागी। एक्सप्यान्डीले तपाईंको खाताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ यसको अनुगमन सुरक्षा सीमा फलो-अप र कनेक्शन अनुरोधहरूको लागि लागू गरेर, निर्धारित कार्य घण्टा भित्र सन्देश पठाउँदै, र केवल एक क्लिकको साथ बचेका निम्तो बाँकी रहेको निमन्त्रणा हटाएर।
हामीलाई थाहा छ कि सामाजिक बिक्री र पूर्वेक्षण धेरै बोझी हुन सक्छ यदि तपाईंले सही उपकरणहरू वा उत्तम संसाधनहरू प्रयोग गर्नुभएन भने। लिंक्डइन सेल्स नेभिगेटर जस्ता प्लेटफर्मको प्रयोगले तपाईंलाई एकदमै द्रुत साथ साथै न्यूनतम प्रयासको साथ ठूलो सम्भावित सूची निर्माण गर्न दिन्छ। त्यसो भए तपाईले त्यो सूची लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई एक्सपान्डिमा आयात गर्न सक्नुहुन्छ, यसले तपाईंको धेरै समय लिने कामहरू गर्दछ।
Sa. बिक्री नेभिगेटरबाट अंतर्दृष्टि
त्यहाँ बिक्री नेविगेटरमा धेरै सुविधाहरू छन् जुन तपाईं महान प्रयोगमा राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई सही प्रयोग कसरी गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंलाई केहि ताजा लीड्स चाहिएमा, बिक्री नेभिगेटरले तपाईंको प्रोफाइल जानकारी र प्रयोगको आधारमा लिड्स सिफारिस गर्न सक्दछ।
फेरि, यदि तपाईंसँग एक आशाजनक तर उच्च रखरखाव नेतृत्व छ, बिक्री नेविगेटरले तपाईंलाई ग्राहक प्रोफाइलमा नोटहरू र ट्यागहरू दिन अनुमति दिन्छ। यो तपाइँको CRM को साथ पनि सिंक हुन्छ।
यसबाहेक, यदि तपाईं इनबाउन्ड लिंक्डइन मार्केटिंगमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, बिक्री नेभिगेटरले तपाईंलाई विस्तारित दृश्यता दिनेछ। यसैले तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ कि कसले भर्खर तपाईको प्रोफाईल हेर्यो। यस तरिकाले, तपाईं जो तपाईं र तपाईंको संस्था मा पहिले नै रुचि छ जान्न सक्नुहुन्छ।
Pro. प्रस्पेक्ट्स मानको प्रस्ताव गर्नुहोस्
लिंक्डइनमा, सम्भाव्यताहरू जसले भर्दछन् रुचियाँ तिनीहरूको प्रोफाइल को सेक्सन वास्तव मा तपाईं एक ठूलो समर्थन गर्दै छन्। यस आधारमा, ती विषयहरूको सम्पूर्ण सूची प्रदान गर्दै छन् जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
उनीहरूको व्यक्तित्व र प्राथमिकताहरू बुझ्नको लागि छलफलको मैदान
कसरी तपाईंको कम्पनी र यसको उत्पादनहरू उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ भन्नेमा सडक नक्शा
तपाइँको नेतृत्व ले के रूचि राख्दछ भन्ने कुरा जान्न र तपाइँको उत्पादनहरूले उनीहरूलाई खोजिरहेको मूल्यको साथ कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न एक शानदार दृष्टिकोण हो। यो तपाइँ प्रतिस्पर्धीहरु को लागी एक ठूलो माथिल्लो हात दिनेछ जो तिनीहरूको नेतृत्व मा आफ्नो दृष्टिकोण निजीकृत गर्न पर्याप्त ध्यान छैन।
Chrome। क्रोममा बिक्री नेभिगेटर विस्तार थप्नुहोस्
यो एक साधारण ट्रिक हो जसले तपाईंलाई धेरै समय र उर्जा बचत गर्दछ। बिक्री नेभिगेटरको क्रोम विस्तार तपाइँको जीमेल खाता भित्रबाट लिंक्डइन प्रोफाइलहरू हेर्न सक्षम गर्दछ। थप रूपमा, यो एक्स्टेन्सनले तपाईंलाई आइस-ब्रेकर शीर्षकहरूको साथ मार्गदर्शन गर्न सक्छ, तपाईंको लागि नेतृत्व बचत गर्दछ, र तपाईंलाई TeamLink डाटा देखाउँदछ।
यदि तपाईं अहिले सम्म पढ्नु भएको छ भने, त्यहाँ एउटा प्रश्न छ जुन तपाईंले सोध्न सक्नुहुन्छ:
के लिंक्डइन बिक्री नेविगेटर तपाईंको पैसाको लायक छ?
संक्षिप्त उत्तर दिन, हो, यो छ। जबकि साना व्यवसाय र बिक्री संगठनहरूले पहिले यस संस्करणमा लगानी गर्न लायक छ कि भनेर हेर्न सबै भन्दा पहिले नि: शुल्क संस्करण कोशिस गर्नुपर्दछ, ठूला व्यवसायहरूले निश्चित रूपमा यस प्लेटफर्मको राम्रो बिक्री पाइपलाइन र अधिक कुशल कार्यप्रवाहको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ।
लिंक्डइन बिक्री नेविगेटर डेमो Expand LinkedIn Automation
टैग: b2bb2b मार्केटिंगविस्तारसीसा खोज्नुहोस्सीसा र संभावनाहरू फेला पार्नुहोस्अनलाइन नेतृत्व खोज्नुहोस्संभावनाहरु खोज्नुहोस्LinkedInलिin्कडिन बिक्री नेभिगेटरमाइक्रोसफ्ट गतिशीलता 365 XNUMXबिक्री नेभिगेटरबिक्री बल
सास उद्यमी | लिंक्डइन अटोमेसन / एक्सपांडी.आई.ओ. का लागि संसारका सबसे सुरक्षित सफ्टवेयरको संस्थापक5भन्दा बढी बर्षको लिडरएक्सप्रेस.एनएलएलका संस्थापक